Ingaba Imilenze Yam Izakuba Mikhulu Ukukhwela ibhayisekile-BikeHike
Ngaba ukukhwela ibhayisekile kwenza imilenze yakho ibe mincinci?
Ndiyimisa njani imilenze yam ekubeni ibe nkulu xa ndikhwele ibhayisekile?
Ngaba imizuzu engama-30 yokuhamba ngebhayisikile ngosuku yanele?
Kutheni imilenze yam isiba mikhulu ngenxa yokukhwela ibhayisekile?
Ngabakhweli beebhayisikile bayifumana njani imilenze ebhityileyo?
Ngaba ukukhwela ibhayisekile kukunika isithukuthezi esikhulu?
Ngaba ukukhwela ibhayisekile kukwenza ube bhityile?
Ngaba ukukhwela ibhayisekile kuyasinciphisa isisu?
Ngaba ukukhwela ibhayisekile yonke imihla kuninzi kakhulu?
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana ibhayisekile efanelekileyo?
Ingaba ibhayisekile ilungile emathangeni?
Ingaba ibhayisekile ingathatha indawo yosuku lomlenze?
Ngaba ukukhwela ibhayisekile kulungile kwimilo yomzimba?
Kutheni abakhweli beebhayisikile bebhitye kangaka nje?
Ngaba ukuhamba ngebhayisekile kuyenza ithoni yemilenze yam?
Ngaba ukubaleka okanye ukukhwela ibhayisekile kungcono kwimilenze yokulinganisa?
Ingaba ibhayisekile iza kuwutshintsha njani umzimba wam?
Ungathoba kangakanani ubunzima bokuhamba ngebhayisikile imizuzu engama-30 ngosuku?
Impendulo emfutshane yokuba ingaba ibhayisekile okanye ayizukuyenza imilenze yakho ibe mikhulu - hayi. Ngokuqinisekileyo, ukuhamba ngebhayisikile kuphucula imisipha yomlenze wakho, kodwa njengomsebenzi we-aerobic, kusebenza ukunyamezela kwakho imicu yemisipha, okwenza ukuba baxhathise ukudinwa ngelixa uqeqesha, kodwa ingabangeli ukuba bakhulu.
Ukukhwela ibhayisekile yakho kubonelela umthambo we-aerobic ongenampembelelo kwaye unegalelo ekutshiseni amanqatha omzimba. Ukuhamba ngebhayisekile rhoqo kunokwenza imilenze yakho ibe bhityileyo. Nabani na onotyekelo lobuninzi bomsebenzi, ukunciphisa ukuxhathisa kunye nokunikela ingqalelo kubuchule bakho kuya kukunceda ufezekise ukwehla kobunzima ngaphandle kokongeza ubunzima bezihlunu.
Indlela Yokuhamba Ngebhayisikili Ukunciphisa Ubunzima kwaye Ungadali Imilenze Emikhulu Injongo yokukhwela ixesha elide, kunokuba ukhwele nzima, ukwandisa ikhalori yakho yokutshisa kunye nokwakha ukunyamezela. Sebenzisa uqeqesho lwekhefu ukwandisa ukutshiswa kweekhalori. Khetha imigama ethe tyaba kuneenduli ngexesha lokuzilolonga.
Ukuzilolonga ngebhayisekile ubuncinci imizuzu engama-30 ngosuku kuya kukwakha ukuqina kwentliziyo kunye nemisipha. Ungaziva kwakhona amanqanaba amandla aphezulu imini yonke, kuba imithambo inceda ukonyusa amandla akho onke.
Noko ke, xa izihlunu emilenzeni yakho zomelela, zidla ngokukhula. “Ukuba ubunokukhwela kuxhathiso olunzima ixesha elide, kunokwenzeka ukuba ungafumana izihlunu ezingakumbi,’” utsho uKeoni Hudoba, umyili weCyc Method, kunye nomhlohli webhayisekile kwiCyc Fitness yeNYC.
Isantya sokuhamba ngebhayisikile ngokukhawuleza senziwa kwinqanaba eliphantsi lokumelana. Umthambo webhayisekile wangaphandle wenziwa ngegiya ephantsi kwindlela ethe tyaba ukufumana loo milenze ibhityileyo yomkhweli webhayisikile. Umahluko ngokuzilolonga endulini kukuba umzimba wakho ubhangisa imilenze rhoqo nto leyo ekhokelela kwitoni yemisipha.
Ukuhamba ngebhayisekile akusayi kukunika i-butt enkulu, kodwa kunokukunika ukumila ngakumbi ngenxa yeenzuzo zayo ze-cardio kunye ne-muscle-building. Ukuhamba ngebhayisikili kusebenza imilenze yakho kunye ne-glutes, ngakumbi xa ukhuphuka, kodwa ayihlali ixesha elide okanye inikeze ukuchasana okwaneleyo ukwakha imisipha emikhulu.
Ukukhwela ibhayisekile yeyona ndlela ibalaseleyo yokuzilolonga. Inokukunceda ukunyusa impilo yentliziyo kunye nemiphunga, ukuphucula ukuhamba kwegazi lakho, ukwakha amandla omzimba, kunye nokunciphisa amanqanaba akho oxinzelelo. Ngaphezulu koko, kunokukunceda ukuba utshise amanqatha, iikhalori zetotshi, kunye nokunciphisa umzimba.
Ewe, ukuhamba ngebhayisikile kunokunceda ukulahlekelwa ngamafutha esiswini, kodwa kuya kuthatha ixesha. Uphononongo lwakutsha nje lubonise ukukhwela ibhayisekile rhoqo kunokunyusa ukulahleka kwamafutha kunye nokukhuthaza ubunzima obunempilo. Ukunciphisa i-belly girth, i-moderate-intensity-intensity aerobic exercises, njengokuhamba ngebhayisikile (nokuba ngaphakathi okanye ngaphandle), iyasebenza ukuthoba amanqatha esiswini.
Ukuhamba ngebhayisekile yonke imihla kulungile xa kwenziwa ngenqanaba lokuqina elifanelekileyo kwaye ukuba umzimba wakho unexesha elaneleyo lokubuyela kwimeko yesiqhelo. Abakhweli beebhayisikile abakhuphisanayo badinga iintsuku zokubuyela kwimeko yesiqhelo xa kujongwa ubunzulu boqeqesho lwabo kunye nogqatso, ngelixa abakhweli beebhayisikile abaqhelekileyo bekwazi ukukhwela ibhayisekile ngaphandle kokuthatha ikhefu leentsuku.
Emva kwekhefu elide, ndifumanisa ukuba kuthatha phakathi kweentsuku ezisixhenxe kunye neshumi ukuze ndiqale ukuziva njengesiqhelo kwibhayisekile kwakhona. Iintsuku ezimbalwa zokuqala ziya kuba ngumzabalazo kodwa emva kweveki okanye ngoko kufuneka uzive ulungile ukuqalisa ukwandisa umthwalo woqeqesho, kwaye ke uhambe kakuhle kwindlela yokubuyisela.
Ukuhamba ngebhayisekile kunokunceda ithoni yemilenze, amathanga kunye neempundu Kunye nokubaleka nokuqubha, ukukhwela ibhayisekile yenye yezona ndlela zibalaseleyo zokuzilolonga; iyakomeleza kwaye iphuhlise amalungu omlenze kunye nezihlunu kwaye inokukunceda ulahlekelwe ngamafutha emathangeni nasematholeni.
Makwazeke ukuba awukwazi "ukubuyisela" usuku lomlenze. Ewe, ukukhwela ibhayisekile yokuzivocavoca okanye ukuthatha iklasi yokujikeleza kanye okanye kabini ngeveki kuya kunceda ngokwakha izihlunu emilenzeni.
Ukuhamba ngebhayisekile yindlela elungileyo yokulawula okanye ukunciphisa ubunzima, njengoko inyusa izinga le-metabolic yakho, yakha izihlunu kwaye itshisa amanqatha omzimba. Ukuba uzama ukunciphisa umzimba, ukukhwela ibhayisekile kufuneka kudityaniswe nesicwangciso sokutya okunempilo. Uphando lwaseBritane lubonisa ukuba ukukhwela ibhayisekile yesiqingatha seyure yonke imihla kuya kutshisa phantse iikhilogram ezintlanu zamafutha ngaphezulu konyaka.
6. Kutheni iingalo zabakhweli beebhayisikile zibhityile nje? Ngokuyinxenye ziincukuthu ezitya inyama kwikhithi yethu ebilayo, kodwa ubukhulu becala kungenxa yokuba (oku kuntsokothile) iipedals ziphantsi kweenyawo zethu kwaye iingalo zethu azenzi nto ngaphandle kokuhamba kancinci ndindisholo.
Njengomdlalo wonyamezelo, ukukhwela ibhayisekile kunokuba luncedo kakhulu kwimpilo yentliziyo, kunye nezihlunu ezithambileyo, ukuphucula imbonakalo yomzimba kunye nokunyusa umfanekiso womzimba. Kwaye kunokunceda ukuphucula ithoni yemisipha yemilenze yakho, i-glutes kunye nengundoqo.
Ukuhamba ngebhayisikile kunokukunceda ukuba wakhe izihlunu kwisiqingatha sakho esisezantsi. Ukubaleka akuyi kukhokelela kubuninzi obuninzi, kodwa kunokukunceda ukuba uphuhlise izihlunu eziqinileyo, ezithambileyo. Ukutyhala iipedali ngelixa ukukhwela ibhayisekile kuluqeqesho loxhathiso olwakha izihlunu zomlenze.
Ulawulo lobunzima Ukuhamba ngebhayisekile ngokwesiqhelo, ngakumbi xa ukwizinga eliphezulu, kunceda amanqanaba asezantsi amafutha emzimbeni, nto leyo ekhuthaza ukulawulwa kobunzima obunempilo. Ngaphezu koko, uya kwandisa imetabolism yakho kwaye wakhe izihlunu, ezikuvumela ukuba utshise iikhalori ezininzi, nangona uphumle.
Kulula ukugqithisa isitya se-ayisikrimu kunokuba usebenze. Nangona kunjalo, nokuba awuzange wenze lutshintsho kwisicwangciso sakho sokutya sesiqhelo, ukukhwela ibhayisekile yomthambo nje imizuzu engama-30 izihlandlo ezihlanu ngeveki kuya kukunceda wehlise enye ukuya kwiiponti ezimbini ngenyanga. Ukuba utya ukutya okunempilo kunye nokuzilolonga, unokulindela ukulahlekelwa ngakumbi.
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba ukukhwela ibhayisekile kungayenza imilenze yakho ibe mikhulu
Umbuzo: Ngaba ukukhwela ibhayisekile kuyenza ibe mikhulu imilenze yakho
Umbuzo: Ngaba Ukukhwela ibhayisekile kuyenza Mikhulu imilenze yam
Umbuzo: Ngaba Ukukhwela ibhayisekile kuyanceda kwi-Unterus Muscle
Ngaba Ukukhwela ibhayisekile kuyanceda ukwakha izihlunu
Ngaba iBhayisekile inceda iTowuni yemilenze
Umbuzo: Ngaba Ukucheba Imilenze Kuyanceda Ukukhwela ibhayisekile
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba iBhayisekile iyawunceda uMzimba oPhezulu
Umbuzo: Ngaba ukukhwela ibhayisekile kuyayinciphisa imilenze yakho okanye ibe nkulu
Ukukhwela ibhayisekile kuwunceda njani umzimba wakho
Umbuzo: Ngaba ukuQhubela ibhayisekile kunokunceda ngaMafutha oMzimba ophantsi
Ungawunceda Njani Ukukhwela ibhayisekile uMzimba Wakho